Spaghetti aglio, olio ary peppermint | ThermoRecipes
Spaghetti aglio, olio ary sakamalao
paty15 minitraOlona 4350 kaloria
Ity anarana izay tsara feo ity dia tsy inona akory spaghetti miaraka amin'ny tongolo lay, menaka ary sakay, mahazatra ny nahandro italiana. Tsotra, haingana, fa tena mahafinaritra sy matsiro. Ho fanampin'izany, hampiasa ny teknika fandrahoana pasta ao amin'ny thermomix anay izay tsotra be ary ataonay antoka fa al dente izy ireo.
Miaraka amin'ireo akora fototra telo, dia hanao spaghetti takelaka mahafinaritra izahay, izay atoroko ho ambonin'izany rehetra izany, amin'ireny tranga ireny izay tsy dia manam-potoana hanomanana ny sakafo isika, na rehefa miseho saika tsy misy fampandrenesana ireo vahiny. Ho fanampin'izay, izy ireo dia singa izay ananantsika foana ao an-tranonay ho "ambanin'ny lalimoara".
Rehefa mampiasa fotsiny Akora 3Ny tena zava-dehibe dia misy kalitao ireo, indrindra ny menaka oliva.
Ary farany, tonga lafatra ho an'ny lakolosy sy atody tsy mahazaka (raha mbola tsy mampiasa atody ny paty amin'ny fanomanana azy), ary koa ho an'ny olona vegan o zavamaniry
1 Spaghetti aglio, olio ary sakamalao
Spaghetti miaraka amin'ny tongolo lay, menaka ary sakay. Mety ho fampianarana faharoa ary ho an'ireo fotoana tsy anananay fotoana mahandro. Resipeo haingana sy mora.
Fotoana manontolo: 15M
Rano 1.500 gr
Paty 500 gr
Menaka oliva virjiny fanampiny 75 gr
Jirofo tongolo gasy 8, voadidy manify
Koba maina 3
Ravina persily 1 kaopy
Apetrakay ao anaty vera ny ravina persily ary potehinay 5 segondra, hafainganam-pandeha 6. Isika dia midina izay rehetra eo amin'ny rindrina ary midina amin'ny lelany isika. Averinay ny fandidiana. Esory ary tahirizo amin'ny lovia mba ampidirina amin'ny faran'ny fomba fahandro.
Ankehitriny dia handrahoana paty izahay. Tsy manasa vera ianao, ampio ny rano miaraka amin'ny sira sy menaka 1 sotrokely ao anaty vera. Izahay dia manao fandaharana 12 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Izahay dia manampy ny paty amin'ny alàlan'ny vavan'ny goblet sy ny programa ny fotoana voalaza amin'ny fonosany, 100º, hafainganam-pandehan'ny sotro.
Arotsinay amin'ny alàlan'ny harona na saringan izany ary atsofoka ao anaty fitoeram-bokatra lalina sy lehibe, izay hampifangaroantsika azy ireo amin'ny menaka manitra izay homaninay manaraka.
Raha tsy manasa vera ianao dia ampio ny diloilo 75 g, ny tongolo gasy voadidy ary ny sakay. Izahay dia manao fandaharana 2 minitra, maripana varoma, hafainganam-pandeha 1, fihodinana havia. Hitanay raha nanjary volontsôkôlà ny tongolo lay. Raha tsy izany dia mandahatra 1 minitra fanampiny isika. Amin'ny fiafaran'ny fotoana dia avelao ny tongolo lay sy ny sakay hiala sasatra mandritra ny 1 minitra miaraka amin'ny fijanonan'ny thermomix.
Izahay dia manampy an'io menaka misy tsiro io amin'ny fitoeran-tsaka izay nanananay spaghetti, ampio sira sy dipoavatra hanandrana, afafazo amin'ny persily voatetika ary afangaro tsara. Raha hitantsika fa tsy misy menaka io dia afaka manampy fantsona iray hafa isika na maka fitoeran-diloilo amin'ny latabatra mba hahafahan'ny vahiny tsirairay manidina famafazana eo ambony lovia raha tiany.
Fanazavana fanampiny - teknika fandrahoana pasta
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Lakozia iraisam-pirenena, Latsaky ny 15 minitra, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Vary sy Pasta » Spaghetti aglio, olio ary sakamalao
Rehefa mahandro ny paty amin'ny thermomix dia tsy tokony hivadika mihodina isika mba tsy hofongorin'izy ireo ???
Salama Pepi, tsy ilaina izany satria ambany loatra ny hafainganam-pandehan'ny sotro hahafahako manapaka azy ireo. Fa mazava ho azy, azonao atao ny mametraka ny fihodina ankavia ary noho izany dia tsy hanapaka mihitsy izy ireo. Misaotra nanoratra taminay! Famihinana.